Mety hiatrika “sazy ho faty” ny Kameroney satria mandrahona hanala ny fanafody antiretroviral ny Global Fund · Global Voices teny Malagasy
Mihaodihaody amin'ny olona 500.000 miaina VIH ny fanjavozavoana ny hoavy
Voadika ny 17 Septambra 2019 12:20 GMT
Marika “Fantaro ny sata VIH anao” hita any Zambia. Saripikan'i Jon Rawlinson tao amin'ny Wikimedia Commons CC BY 2.0.
Nampitandrina ny Global Fund fa hanala ny fanampiany iraisam-pirenena hiadiana amin'ny VIH amin'ny fanafody antiretroviral (ARV) maimaim-poana any Kamerona, raha manohy midify amin'ny fandoavana ny ampaham-pamatsiany io firenena io.
Tokony handoa 20 isanjaton'ny vidiny i Kamerona mba hahazoana ny fanafody, saingy efa tafakatra 47 tapitrisa dolara ny trosany amin'ny famatsiam-bola, araka ny filazan'ny BBC tamin'ny 4 Septambra.
Nilaza tamin'ny Global Voices ny loharanom-baovao miara-miasa amin'ny programam-pirenena momba ny VIH/SIDA izay tsy te-hitonona anarana fa “nolazaina avy any Yaoundé [renivohitra] izahay mba hijery ny tahirin'ny ARV [ary] hahafantatra ny zava-misy.” tsy namoaka valiny ofisialy ny governemanta, na izany aza.
Hanajanona ny fifanarahana amin'i Kamerona ihany koa ny Tahiry Iraisam-pirenena (Global Fund), izay mamatsy vola amin'ny ady amin'ny tazomoka sy ny raboka manerana izao tontolo izao manomboka amin'ny volana Janoary 2020. Noho izany dia tsy maintsy mandoa ny volam-panafodiny ry zareo mba ho afaka miaina ara-dalàna ireo mitondra ny otrikaretina VIH .
Vehivavy iray no nilaza tamin'ny BBC fa “sazy ho faty ho an'ny olona voan'ny VIH” ny tsy fahazoana ireo fanafody ireo. Dokotera iray mitantana toeram-pitsaboana nilaza tamin'ny BBC fa nihena ny famatsiana ARV nanomboka tamin'ny volana jona. Efa zatra nanome fitsaboana ARV hatramin'ny telo volana izy kanefa dia lasa iray volana sisa no azony omena ankehitriny noho ny tsy fahampian'ny famatsiana sy ny ahiahy fa mety hifarana ny famatsiana.
Nisy ny fivoarana tsara nataon'i Kamerona amin'ny ady amin'ny SIDA saingy ankehitriny dia mety manomboka mividy fanafody ARV izay nomena maimaim-poana nandritra ny folo taona mahery ny marary noho ny tsy fandoavan'ny governemanta vola tany amin'ny Global Fund.
Nilaza tamin'ny Global Voices ny solontenan'ny minisitry ny fahasalamana any Kamerona, Ebongo Zacchaeus fa misy antony mampanahy.
“Hisy fivoriana lehibe ao amin'ny Minisiteran'ny fahasalamana mba hiresaka momba io olana io. Manao izay ho afany ny minisitra mba hahazoana antoka fa hitohy ny famatsiana, ”hoy i Ebongo, manala ny tahotra amin'ny mety tsy hisian'ny fanafody ARV any Kamerona.
“Tsy misy intsony ny tahiry; any amin'ny hopitaly ihany no ahitana ny ARV – manana olana izahay amin'ny fizarana azy ireo any amin'ny faritra iharan'ny krizy, ”hoy izy.
Manondro ireo faritra atsimo-andrefana sy avaratra andrefana Anglôfônina any Kamerona izay niharan'ny ady mitam-piadiana teo amin'ireo mpikomy Anglôfônina sy ny miaramila frankôfônina tao anatin'ny hetsika fisintahana Anglôfônina i Ebonge. Vokatry ny ady naharitra, notombanan'ny Firenena Mikambana ho olona 1.800 farafahakeliny no maty ary maherin'ny 530.000 no nafindra toerana, miampy olona 1,3 tapitrisa mihoatra mila fanampiana.
Noho ny fihenan'ny tahan'ny VIH ho 3,4 isan-jato tamin'ny taona 2018 raha 4,3 isanjato tamin'ny taona 2011, hoy ny BBC, dia hampihemotra ny fandrosoana lehibe vitan'i Kamerona amin'ny ady amin'ny VIH sy SIDA indray ity fanapahan-kevitra ity.
Amin'izao krizy mitohy any amin'ny faritra avaratra-andrefana sy atsimo andrefana izao, dia misy ny risika lehibe amin'ny “fitomboan'ny otrikaretina VIH haingana taorian'ny fampiatoana ny fanafody ARV”:
Miharatsy haingana ny toe-piainan'ny olombelona any amin'ny faritra avaratra sy atsimo-andrefan'i Kamerona
-Olona 1,3 tapitrisa mila fanampiana
– Olona maherin'ny 437.000 nandositra ny tranony
– Maherin'ny 80% ny ankizy tsy mankany an-tsekoly intsony
– mety hitombo vetivety ny otrikaretina VIH vaovao aorian'ny fampiatoana ny fanafody ARV
Tamin'ny taona 2013, nanambara programa vaovao fitsaboana VIH ny Global Fund sy Kamerona; nanambara famatsiam-bola 20 tapitrisa dolara ny Global Fund raha nanolo-tena hanamafy orina ny fiarahamiasa kosa i Kamerona amin'ny alàlan'ny fametrahana izany ho laharam-pahamehana ao amin'ny tetibolam-panjakana.
Ankehitriny, miatrika fanjavozavoana amin'ny hoavy ny maherin'ny antsasaky ny olona miaina miaraka amin'ny VIH any Kamerona:
Mihaodihaody eo amin'ny fahaveloman'ny olona antsasaky ny tapitrisa miaina miaraka amin'ny VIH any Kamerona ny fanjavozavoana amin'ny hoavy